Abantu: Sukusebenzisa iziyobisi zentshulube ye-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Abantu: Sukusebenzisa iziyobisi zentshulube ye-COVID-19
Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Safety • Tourism • Iindaba ezahlukeneyo
Agasti 31, 2021
Amachiza ezilwanyana awenzelwe abantu
I-Health Canada ikhuphe isibongozo esingxamisekileyo kubemi bayo ukuba bangasebenzisi iyeza lokumisela izilwanyana elaziwa njenge Ivermectin ukunyanga i-COVID-19 okanye ukuzama ukuthintela ukufumana i-coronavirus.
Ivermectin arhente antiparasite ngohlobo amacwecwe, cola, isisombululo yomlomo, isisombululo inaliti, premix medicated, okanye mlonyeni.
I-Health Canada ikhuphe ingxelo kubemi bayo isithi ukuba eli yeza lithengelwe le njongo, yilahle kwangoko.
Unonophelo lwempilo kufuneka kuboniswane ukuba le mveliso ibisetyenzisiwe kwaye kukho iingxaki zempilo.
Abantu ababhenela kwiziyobisi zezilwanyana okanye ezinye iindlela ayonto intsha xa kufikwa kwinkxalabo yezempilo. Inkosi yeIndiya yoNyango kwafuneka ilumkise abemi baseIndiya malunga nesiko lokuzigquma umgquba weenkomo nomxube womchamo njengeyeza coronavirus.
I-Health Canada ifumene malunga neengxelo zokusetyenziswa kwe-ivermectin yezilwanyana ukunqanda okanye ukunyanga i-COVID-19. Abantu baseCanada akufuneki basebenzise iimveliso zempilo ezilungiselelwe izilwanyana ngenxa yeengozi ezinokubangelwa zempilo.
Kolu khanyiso, iMpilo Canada icebisa abantu baseKhanada ukuba bangasebenzisi nokuba yeyiphi na iinguqulelo zezilwanyana okanye iziyobisi zabantu zeIvermectin ukuthintela okanye ukunyanga i-COVID-19. Akukho bungqina bokuba ivermectin nokuba kukwenziweni ikhuselekile okanye iyasebenza xa isetyenziselwa ezo njongo. Inguqulelo yabantu ye-ivermectin igunyazisiwe ukuba ithengiswe eCanada kuphela kunyango losulelo lwe-parasitic worm ebantwini.
Inguqulelo yezilwanyana ye-ivermectin, ngakumbi kwiidosi eziphezulu, inokuba yingozi ebantwini kwaye inokubangela iingxaki zempilo ezinje ngokugabha, urhudo, uxinzelelo lwegazi, uguquko, isiyezi, ukuxhuzula, isiqaqa, kwanokufa. Iimveliso ze-Ivermectin zezilwanyana zinedosi ephezulu yokugxila kuneemveliso ze-ivermectin zabantu. Isebe liyazazi iingxelo ezininzi zezigulana e-US eziye zafuna inkxaso yezonyango kwaye zalaliswa esibhedlele emva kokusebenzisa ivermectin eyenzelwe amahashe.
IMpilo Canada ijonge ngononophelo lonke unyango olunokubakho lwe-COVID-19, kubandakanya unyango olufundwayo kwizilingo zeklinikhi zamanye amazwe. Ukuza kuthi ga ngoku, iMpilo Canada ayikafumani kungeniso lweziyobisi okanye isicelo setyala leklinikhi ye-ivermectin yothintelo okanye unyango lwe-COVID-19.
Amachiza anokuba luncedo ekunyangeni i-COVID-19, iMpilo Canada ikhuthaza abavelisi bamachiza ukuba benze uvavanyo lwezonyango. Oku kuya kunika ithuba kuluntu lokhathalelo lwempilo ukuba luqokelele ulwazi ngokusebenza konyango kunye nemingcipheko enxulumene nalo.
Ukuba umenzi unikezela ngokungeniswa kwi-Health Canada enxulumene nokusetyenziswa kwe-ivermectin ukuthintela okanye ukunyanga i-COVID-19, iMpilo Canada iya kwenza uvavanyo lobunzululwazi lobungqina bokumisela umgangatho weyeza, ukhuseleko kunye nokusebenza.
I-Health Canada iya kuqhubeka nokubeka iliso kule meko kwaye iya kuthatha amanyathelo afanelekileyo kwaye kwangexesha ukuba ulwazi olutsha lukhona, kubandakanya naluphi na ulwazi malunga nentengiso engekho mthethweni okanye ukuthengiswa kwe-ivermectin. Ezempilo Canada ziya kunxibelelana nalo naluphi na ulwazi olutsha ngokhuseleko kubasebenzi bezempilo kunye nabathengi.
Impilo Canada sele ilumkisile abantu baseKhanada malunga neemveliso ezenza amabango obuxoki nawalahlekisayo ukuba anyange okanye anyange i-COVID-19. Ngolwazi malunga neMpilo Canada ugonyo olugunyazisiweyo kunye nonyango, ndwendwela iCanada.ca.
Ivermectin, imveliso yamayeza amiselweyo, igunyazisiwe ukuba ithengiswe eCanada kunyango losulelo lwe-parasitic worm ebantwini, ngakumbi i-solidyloidiasis yamathumbu kunye ne-onchocerciasis, kwaye kufuneka isetyenziselwe le njongo kuphela, phantsi kweliso lobungcali kwezempilo. Inguqu yezilwanyana yeli yeza iyafumaneka ukunyanga usulelo lwe-parasitic kwizilwanyana. Abantu akufuneki basebenzise ingxelo yezilwanyana yale mveliso.
Yintoni ekufuneka yenziwe ngabathengi
Ukuba ivermectin yathengwa kuthintelo okanye unyango lwe-COVID-19, yeka ukuyisebenzisa kwaye uyilahle. Landela izikhokelo zikamasipala okanye zengingqi malunga nendlela yokulahla imichiza kunye nenye inkunkuma eyingozi, kwaye ubuyisele imveliso kwindawo yentengiso ukuze ilahlwe ngokufanelekileyo.
Nxibelelana noochwephesha wezempilo ukuba ivermectin isetyenzisiwe kwaye kukho iingxaki zempilo. Xela naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga ezivela kule mveliso ngqo kwiMpilo Canada. Ngenisa isikhalazo kwi-Health Canada ukuba naluphi na ulwazi malunga nentengiso engekho mthethweni okanye ukuthengiswa kwe-ivermectin okanye nayiphi na imveliso yezempilo usebenzisa ifom yesikhalazo kwi-Intanethi.
Umboniso omtsha kaBenny Hill ubuyile kwakhona
IQela leFraport: I-traffic yabagibeli iyaqhubeka ukwanda...
Iinqwelomoya eziya eAlUla zisuka eDubai naseKuwait kwiflynas ngoku
I-Qatar Airways ilwa nokuthengiswa ngokungekho semthethweni kwezilwanyana zasendle
I-HAYI enkulu kuKhenketho lwaseKenya ngu-UNWTO: I-Afrika Inomsindo!
Iindiza ezisuka eBudapest zisiya eDubai kwi-flydubai ngoku
Umphathiswa wezoKhenketho eJamaica uSihlalo omtsha we-Inter-American...
IWizz Air, iFrontier, iVolaris, iJetSmart bayayithanda iAirbus...
I-Emirates ihlaziya ukuzibophelela kwayo kwiSeychelles kwi-Expo...
IFraport kunye neTAV ziphumelele ithenda yeAntalya Airport entsha...
I-Australia iphinda ivule imida emva kweenyanga ezili-18 ze-COVID...
IVictoria House Resort & Spa, Belize Amatyala amatsha ...
UMphathiswa uthembisa ngokuQeqesha ngokuQonkqisayo kunye...
Inkampani yeFord Motor ihlonipha iBorgWarner ngeHlabathi ...
Ukuthintelwa kokuhamba ukuya eHawaii iinyanga ezi-2 ezingakumbi
IAmazon ithembisa izivumelwano ezintle ngexesha le-Cyber ​​​​ngoMvulo impelaveki
Tyelela i-USA: Iimfuno ezichanekileyo zokungena kwi-United...
Uninzi lwezikhululo zeenqwelo moya ezisetyenziswa ziindwendwe ezisuka eOmicron emngciphekweni...
I-Bahamas, ukubetha kwentliziyo yoKhenketho kubhiyozela ilizwe ...
Uqhushululu olunobundlobongela luqhambuke eSwitzerland ngenxa ye-COVID-19 ...
UIan Chan weMirror Boy Group ngoku uxhasa isangqa...
Ukukhula kwedatha kunye nabanikezeli besalathiso kuqhutywa ...
I-Hybrid City Alliance idibanisa imikhosi kunye ne-BestCities...
Uyigcina njani iLali enoKhenketho lweTea
EParis-eSingapore: Inqwelomoya yeAir France yokugonya ...
Inyikima enamandla eyi-7.1 e-Acapulco, eMexico ...
IJamaica iqinisekisa ii-50 + zeenqwelo moya ezintsha ngeveki phakathi kweCanada ...
I-United Airlines ibonelela ngeekhowudi ze-PayPal QR njengentlawulo entsha ...
I-Geneva ukuya eNew York iinqwelomoya kwi-SWISS kunye ne-United...